Imba yekuratidzira inogona kukamurwa kuita maviri kana matatu zvichienderana nesaizi yechiratidziro.
Iwe unogona kugadzira yako yega nzvimbo nekuronga njanji-mhando inoratidzira mapaneru.Inogona kushandiswa pazvinangwa zvakasiyana senge kuratidzira uye hurukuro.
Sezvo isiri yeyakagadziriswa mamiriro, pane zvinorambidzwa zvichienderana nezviri mukati mekushandisa.Ndokumbira utarise kana uchifunga nezvekushandisa kunze kwekuratidzira, hurukuro, uye mashopu.Iyo haigone kushandiswa neruzha ruzha senge kuridza chiridzwa chemimhanzi kana karaoke. (Yakatemerwa kune mashoma BGM.)
Izvo hazvigoneke kushandura zvakazara zvirevo zvemisangano, hurukuro, nezvimwewo kune zvakatemwa zvepati.
Chinzvimbo panogadziridzwa chiratidziro chepaneru hachigone kuchinjwa pazuva.
Kuti ishandiswe pakuratidzira, magudzanzwi akadai semakrofoni haakwanise kushandiswa.
Izvo zvakare zvinokwanisika kubatanidza iyo diki horo uye yekuratidzira imba (yakasanganiswa kushandiswa). (Izvo zvinodikanwa kukwereta chikamu chimwe chete pazuva rimwe chete.)
Unyanzvi / zvishandiso
2.3 ekuratidzira mapaneru (W3.1 x H46m)
200 mifananidzo hanger
100 nzvimbo dzekuratidzira nevamwe
* Kana paine kupatsanurwa kwekushandisa, iyo nhamba inozochinja.
Sachigaro chete: zvigaro mazana mana
Desk uye cheya: zvigaro mazana maviri
Seti yemidziyo yekuteerera (inosanganisira mamaikorofoni matatu asina waya) uye nevamwe
Vaya vanoshandisa imba yekuratidzira vanogona kushandisa imba yekugadzirira mahara.
* Kana imba yekuratidzira yakakamurwa, ichagoverwa nemamwe mapoka.
Nezve iyo yekuratidzira kamuri yekugadzirira kamuri
* Inogona kushandiswa chete kumisangano.
* Nekuti inogoverwa neiyo diki horo, ndapota gadzirira pamberi.
Ice muchina, nezvimwe.
* Sezvo ichigovaniswa nemukamuri, haigone kusiiwa iri panzvimbo mushure mekunge yaendeswa mukati kana kunze.
[Exhibition pateni 1] Makamuri ese anoshandiswa
Nzvimbo: anenge 338 mativi emamirimita
Exhibition pani yekuwedzera
[Exhibition pateni 2] Yakakamurwa kuita mbiri
Exhibition imba A
Nzvimbo: anenge 166 mativi emamirimita
Kamuri yekuratidzira B
Nzvimbo: anenge 171 mativi emamirimita
[Exhibition pateni 3] Shandisa muzvikamu zvitatu
Exhibition mukamuri 1
Nzvimbo: anenge 83 mativi emamirimita
Exhibition mukamuri 2
Anenge 166 mativi emamita
Exhibition mukamuri 3
Anenge 88 mativi emamita
[Muenzaniso wemusangano] Dzidziso / mashopu (uchishandisa misangano)
Nzvimbo: 362 mativi emamita
Zuva rese shandisa chete 28,000 / 28,000
Yakakamurwa kuita maviri (A / B)
Yakakamurwa kuita XNUMX (XNUMX)
Zuva rese shandisa chete 33,600 / 33,600
Exhibition imba (musangano) Ancillary michina / michina yekushandisa mashandisirwo emari
Exhibition imba (yekuratidzira) Ancillary michina / michina yekushandisa mashandisirwo emari